I-IBC 2019: Ukuphawula Amabali amaVidiyo amaVizrt, i-NewTek kunye ne-NDI Unite | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-IBC 2019: Ukuphawula amaBali amaVenkile eVisrt, iNewTek kunye ne-NDI Dibanisa
IBergen, eNorway - Vizrt, NewTekI-NDI kunye ne-NDI® iza kwi-IBC 2019 (yima i-7.B01) phantsi kwembrela ye-brand Vizrt Iqela-ukudibanisa amabali amathathu obhaptizo obonakalayo ophantsi kwenjongo enye-ukunceda abathengi ukuhambisa amabali ngakumbi, baxelelwe ngcono.
The Vizrt Iqela lemveliso liza kwenza abathengi ukuba bafumane ulwazi oluntsonkothileyo lokuboniswa kwamabali kwaye bandise ubuchule babo. Ngokudibeneyo, uphawu lubonelela ngokufikelela kweyona qonga lipheleleyo lezisombululo ezisekwe kwisoftware, ezichazwe kwisoftware-zikhonza lonke uhlobo lomthengisi wamabali ngalo lonke uhlobo lombutho.
Ngaxeshanye, NewTek kwaye Vizrt baya kunyusa iindlela zabo ezikhoyo zokuthengisa kwaye bahlala bezinikezele kwiziseko zabo zabathengi.
Vizrt iya kuqhubeka nokuyila kunye nokubumba imeko ye-ecosystem eyenza ukuba amabango aphezulu ebali lokuboniswa kwamabali kusasazo, ushishino kunye namajelo eendaba. Oku kwenziwa ukuba kufikeleleke kubathengi ziingcali zeqela labasebenzi beenkonzo zengcali, abaphathi be-akhawunti nabaphathi bempumelelo yabathengi.
NewTek iya kuqhubeka ukunika wonke umntu obalisa ibali ilizwi ngevidiyo ngokusebenzisa inethiwekhi yomthengisi onamandla. NewTek uzibophelele ekusebenzeni namahlakani ayo ejelo lokuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi wokugqibela kwaye indlela yendlela yentengiso iya kuba yi-100% ngesiteshi sayo esingathanga ngqo.
I-NDI, eyomdabu ngokwendalo, esekwe kwi-IP, kumgangatho woqhagamshelo lwevidiyo ngoku iza kubekwa phantsi kwembrela ye Vizrt Iqela. Oku kuyakwenza ukuba uphawu lwe-NDI lube nenqanaba lokugxila kunye nokuzimela, ukuze likwazi ukuzisa ixabiso ngakumbi NewTek kwaye Vizrt izisombululo zabathengi, kunye nezo zamaqabane esithathu.
UMichael Hallen, i-CEO, uphawule: “Ngoku sikwimeko yokufumana amandla obuchule bobuvulindlela kunye namandla eenjineli Vizrt, NewTek kunye ne-NDI ukulungiselela bonke abathengi bethu. Ndichulumancile kakhulu ukunceda abathengi bethu ukuba bafikelele kwiinjongo zabo ngokunikezela ngepropathi yethu yobukrelekrele obunamandla, uthungelwano oluxabisekileyo lwesitayile kunye neenkokeli zecandelo lezengcinga. Oku kuya kuqhuba kwinjongo yethu, ebeke ngokulula: amabali amaninzi, abaliswa ngcono. ”
The Vizrt iqela leempawu lixhaswe ngabasebenzi be700 kwiiofisi ze-30 zehlabathi, kunye nokubala i-CNN, Fox, BBC, Mediacorp, New York Giants, SBS, Tencent, Globosat, kunye neMTV phakathi kwabaxumi bayo.
I-CustomWeather kunye neBannister yeFom yeNtsebenziswano yokuDala amaThuba amaShishini amaNtsha kusasazo nakwimpawu zedijithali - Oktobha 21, 2020
IVizrt ilungelelanisa amandla okuhamba kokuhamba kweViz Ibali 2 kunye neViz One 7 kunye neAdobe Premiere Pro - Oktobha 19, 2020
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC Injini yeVidiyo 2019-09-03
Previous: I-LYNX Technik ibhengeza i-8K SDI Fiber Converter kwi-IBC 2019
next: ISIKHOKELO SOKUKHUSELA I-DPUT XPUMX YOKUQINISEKISA ISIQINISEKISO se-IP ye-IBC2110